GIS Manifold - Bogga 4 - Geofumadas
Sida loo sameeyo IMS la Manifold GIS
1. Hawlgeli Adeegyada Macluumaadka Internetka ee IIS IIS, oo loogu talagalay kuwa dhashey 90 ka dib, waa wixii horey ugu soo dhacay Windows NT Option Pack, Windows XP Professional ayaa horeyba u dhexgeliyey, inkasta oo guud ahaan waa in la hawlgeliyaa. Si tan loo sameeyo, waxaad sameyneysaa: "bilow / xakameyn guddi / ku dar ama ka saar barnaamijyada / ...
Khariidadaha Stitch waa codsi dhab ahaantii loogu talagalay isu-imaatinka mosaics-ka, sida khariidadaha afar geesoodka ah ee la marsiiyey laakiin waxay kaloo u oggolaaneysaa in laga soo dejiyo sawirrada Google Earth oo la isugu geeyo mosaic ka dib loo keydin karo hal sawir oo keliya ... qiiq wanaagsan maxaa yeelay waa wax la fulin karo taasi ma qaadanayso in la dego. Waxaan xasuustaa inyar kahor ...
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
Dhacdada GeoTec waxaa la qabtaa sanad walba illaa 1987 si loo dhiirrigeliyo waaya-aragnimada ugu wanaagsan ee hal-abuurnimada iyo hirgelinta teknoolojiyada geospatial. Sidaan kugu tusay ajandaha bisha Juun, waxaa lagu qabtay Ottawa 2 ilaa 5, kaliya maanta oo dhamaaneysa, guuleystayaasha ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, GIS kala cayncayn ah
Xaashida 1: 50,000 waxaa si fiican loogu yaqaanaa sawir gacmeedka dalal badan, markii hore waxaa lagu dhisay Datum NAD27 ee Ameerika. Xaaladdan oo kale ayaan ku soo saaray iyaga oo ah WGS84; Waa qalad in la aamino in lagu badali karo saadaasha kaliya iyadoo la rarayo vector sida dadka qaar u isticmaali jireen gobolada yar yar. Hadaad xasuusato, horay baan u kacay ...
Fariimaha Manifold Subliminal
Si daacadnimo ah uma fahmin xayeysiinta kaladuwan, sawirkani wuxuu ka muuqdaa bogga soo dejinta: Waxaan u maleyneynaa in Manifold neceb yahay Linux maxaa yeelay waxaa kaliya lagu dhejin karaa serverka IIS, laakiin xayeysiintiisa ma sheeganeyso inuu aad ugu faraxsan yahay Microsoft: Waxaan aragnay astaan ​​xumbaynaysa oo loo sameeyay nooca 7,…
Abriil waxay ahayd bil dhib badan, safaro badan laakiin natiijooyin wanaagsan. Maanta, oo si macno leh loogu xuso sida Maalinta Shaqaalaha, waxaan rajeynayaa inaan helo nasasho ku filan. Halkan waxaa ku soo koobaya waxa xagaaga kuleylka ah ee ka tagay 45 gelitaan, shan ka badan qoraalka ayaa sheegaya. Google Earth, wararka iyo isbarbardhiga dadka kale ...
Manifold GIS ayaa in muddo ah suuqa ku jiray, iyada oo tixraacyo fiican laga helay dadka isticmaala ee sida aadka ah loogu kalsoon yahay sida James Fee. Iyo maalmo yar uun kadib shirkii bariga ee loogu talagalay dadka isticmaala Manifold, markii lagu qorayo erayga "Manifold GIS" ee Google, qalab ayaa u muuqda inuu yahay ...
Sida uu sheegay Ricardo Arjona, arag in adduunku yahay mid aan la mahadin oo yar; Waxaan joogi doonaa Shirka BE 2008 ee Baltimore, Maryland laga bilaabo Maajo 28-30; isla markaana Jaamacadda Salisbury waxay noqon doontaa Shirka Manifold Systems Eastern ee 29 iyo 30. Horaan waxaan uga hadlay sida xiisaha leh ...
Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, Video
Maaha wax lala yaabo in lagu arko AutoDesk iyo ESRI shirkii sanadlaha ahaa ee California Geographic Information Systems maadaama ay yihiin maalgaliyayaal dahabi ah (taas oo ah, waxay sii daayaan 5,000 oo cagaf ah sanadkiiba), laakiin si layaableh oo fiican ayaan u aragnaa in Manifold uu sidoo kale ku dhex milmay bandhiga ee shirkii kahor-Abriil 22, 2008.…
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, GIS kala cayncayn ah
Waa kuwan gabagabada qaar ee aan gaadhay ee la xidhiidha istiraatiijiyadda uu Manifold u isticmaalay inuu raqiis ku ahaado, oo aan u nidhaahno wax lagu qoslo oo ku saabsan awooddeeda. Runtu waxay tahay in ganacsiga tikniyoolajiyadda Ma bixiyaan buug daabacan, buuggu waa dijitaal ... waxay ku doodayaan sababta oo ah isbeddelka adduunka ...
Waxaan isticmaali jiray Nidaamka Manifold waxyar ka badan sanad, markaa kadib dhowr qoraal oo aan ka soo qaatay waayo-aragnimadayda anigoo adeegsanaya softiweerkan, halkan waxaa ku soo koobaya kuwa ugu fiican. Khariidadaha juqraafiga ah iyo sawirrada Ha ku sameynin CAD waxa barnaamijyada GIS sameeyaan Georeferencing khariidadda 'dwg / dgn' Sida loo jaangoyn karo khariidad la iska soo ...
Qoraalkii hore, waxaan waqti dheer ku bixinay sharraxaad sida loo sameeyo shaashad sawir gacmeed, iyadoo la adeegsanayo iskudhafyo ku jira Excel, oo loo gudbinayo UTM ugu dambeynna loo beddelay faylka AutoCAD. Kadib marxaladda labaad waxaan aragnay sida loogu diro feylkaan arjiga GIS si loo abuuro jaangooyo gudaha ...
Waxaan u adeegsaneynaa layligan si aan u sharaxno qaar ka mid ah shakiga jidka ku saabsan sida loogu saadaalinayo saadaasha khariidada CAD. Waxaan u adeegsan doonnaa tusaalihii hore loo dhisay, kaas oo aan ka abuureyno a UTM mesh aagga 16 woqooyi oo laga soo qaado warqadda sare laguna dhisayo AutoCAD. 1. Cutubyo. Tani waa dhibaatada ugu weyn markii ...
Kani waa magaca loo bixiyay shirkii Manifold ee 2008 ee lagu qaban lahaa Jaamacadda Salisbury ee Maryland. Fursad wanaagsan oo lagula kulmo isticmaaleyaasha Manifold Systems oo ka kala yimid qaybo kala duwan oo ka tirsan Midowga Mareykanka, iyo wiil, mawduuca ayaa qarka u saaran raadinta baaritaanka xuduudaha ...
Kahor intaanan arkin sida loo abuuro mesh quadrant cadastral ah, hada aan aragno sida loo sameeyo shabakada iskudhafka iyadoo la adeegsanayo arjiga CAD ... haa, ta ay ArcView iyo Manifold aad u fududeeyaan Sidoo kale AutoCAD waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo CivilCAD. Xaaladdan oo kale waxaan arki doonaa sida loogu sameeyo Microstation Geographics, oo adeegsadayaal badani aysan ogeyn ...
Cartografia, cadastre, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Kahor intaanan arkin sida loogu sameeyo Manifold, ArcGIS, iyo sidoo kale waxaan la yaabnay in caan ka ahaanshaha AutoCAD aysan gaarin gorgortan wanaagsan oo lala galo Google si loo awoodo sidoo kale in la sameeyo. Aan aragno wanaagga, xumaanta iyo foosha xun ee gorgortankan: ... KHEYRKA ... way fududahay Dooro muuqaalka Google Earth Tan darteed, ...
AutoDesk Dwg Google Earth KML GIS kala cayncayn ah
AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
Badhtamaha bishan aynu ku jirno ee Janaayo waxa ka dhici doona shir galbeedka dalka Maraykanka loogu talo galay dadka adeegsada Manifold System ee Phoenix, oo loogu magac daray WUSMUC (Shirka Western Users Manifold Users Conference) Maxaa fiican? Adeegsiga Manifold Systems ee codsiyada guryaha (John Norman oo ka tirsan kooxda Taurean) hirgelinta Manifold ee ...